आमाको लागि केकीले लेखिन् निकै भावुक पत्र… « Pariwartan Khabar
आमाको लागि केकीले लेखिन् निकै भावुक पत्र…
23 April, 2020 1:41 pm
११ बैशाख २०७७, काठमाडौँ
आज मातातिर्थ औशी अर्थात आमाको मुख हेर्ने दिन हो । आजको दिन हामी सबैको लागि नै निकै विशेष हुने गर्छ । सबैले आजको दिन आमालाई खुसी बनाउन सक्ने कोशिस गरेका हुन्छन् ।
तर यसपटक आजको दिन पनि लकडाउनका कारण सबैलाई अन्य बर्षभन्दा फिक्कन लागेको छ । तर सामाजिक सञ्जाल भने आमाको तस्बिरले नै भरिएको छ । यस्तै नायिका केकी अधिकारीले भने आमाको लागि आफ्नै हातले पत्र लेखेकी छिन् ।
अहिले पत्र लेख्ने चलन त्यति छैन । विज्ञान र प्रविधिले यति छिटो फड्को मारिसकेको छ कि कसैले पनि पत्रमार्फत आफ्नो सन्देश दिने गरेका छैनन् । तर आमाको लागि लेखेको केकीको हस्तलिखित पत्रले भने अहिले निकै चर्चा पाइरहेको छ । उनले पत्रमा आमाको निकै तारिफ गरेकी छिन् ।
आमाको महिमा कसले पो शब्दमा लेखना सक्ला, त्यसैले मैले पनि त्यो आँट गरिन भो ! मेरो, बाबाको, अनि भाइको जीवन सरल अनि सहज बनाइदिनुभएकोमा हामी कृतग्य छौं, आमा । २३बर्षमा विवाह भएपछिको आफ्नो जिन्दगीको पुरा समर्पण हाम्रो परिवारलाई गरिदिनुलाई कति सजिलै लिन्छौ, हामी । म आमा हुँ, अनि आमाको कुनै सपना हुदैन भन्ने पंग्तीले मलाइ सारै घोच्छ । आमाको सपना अनि संसार हामी नै भयौ ताकी हामीले हाम्रो सपना अनि सुन्दर संसार बनाउन सकूँ । हजुरलाई सधै सुखी राख्न सकु आमा, त्यो आँखामा आँसु देख्न नपरुन् । हरेक जन्म हजुरकै कोखबाट होस् । अनि त्यो कोखको साख राख्न सकौ।
हजुरकी केकु !!!